ကောင်းကင်ကို: မယုံကြည်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးလား?
မယုံကြည်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးလား?
မှတ်ချက်။ ။ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ စာအုပ်ထဲက ကောက်နုတ်ချက်တွေပါ။ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်းစာသားနဲ့ ပြောင်းပြန်ပေးထားပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်က ကျနော်ပေးထားတာပါ။
မယုံဘဲနေလို့ ရရင် မယုံဘဲနေချင်တယ်။ ဟုတ်မှန်းမသိ မဟုတ်မှန်းမသိပဲနဲ့ သိမ်းကြုံးပြီး ယုံနေရတာကို မလုပ်နိုင်ဘူး (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
မှန်ကန်တိကျတဲ့ အချက်အလက် အကြောင်းအကျိုး အထောက်အထားမရှိပဲ မှန်တယ်လို့ပြောတာကို ဘာကြောင့် လက်ခံရမှာလဲ။ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ အဲသလိုသာ လက်ခံနေရင် ကိုယ့်ခေါင်းဟာ အမှိုက်ပုံးလို ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
အကြောင်းအကျိုး ကိုက်အောင် စဉ်းစားနိုင်တဲ့ လူ့အရည်အချင်းကို ပိတ်ပင်တာ၊ ဖျက်ဆီးတာဟာ လူ့အရည်အချင်း အစစ်ကို ဖျက်ဆီးတာ။ ဒါဟာ အရက်စက်ဆုံး၊ အကြီးလေးဆုံး ပြစ်မှုပဲ။ (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
စဉ်းစားခွင့်မပေးတာ၊ သံသယဖြစ်ခွင့်မပေးတာ၊ ကြောက်အောင်လုပ်တာဟာ အသိဥာဏ်ကို သတ်လိုက်တာပဲ။ လူသားရဲ့ အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းကို ဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲ။ လူသားကို လူသားအဆင့်ကနေ ကျသွားအောင် လုပ်လိုက်တာပဲ။ (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
"အမှန်တရားကို ရှာတယ်ဆိုတာကိုက "ပြောသမျှ မယုံဘူး" လို့ ဆို၇ာရောက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် တော်လှန်ရေးတမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်" (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
"အမှန်တရားတွေ ဆိုပြီး ပြောနေကြတာ၊ လက်ခံနေကြတာတွေဟာ အစဉ်အလာတွေ ဖြစ်နေတာ များပါတယ်။ အစဉ်အလာကို ဥာဏ်နဲ့ ဆန်းစစ်မယ်၊ လက်တွေ့အထောက်အထားနဲ့ ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင် အစဉ်အလာ တော်တော်များများဟာ မှားနေတာ တွေ့ရမယ်။ ဆေးပညာမှာလည်း အစဉ်အလာ အယူအဆတွေ မှားနေတာ တွေ့ရမယ်။ စကြဝဠာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း အစဉ်အလာ အယူအဆတွေ မှားနေတာ တွေ့ရမယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း ထို့အတူပဲ။" (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
"အယူအဆ တခုဟာ နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ ချီပြီး ကြာလေ မှားတာတွေ ပါလာဖို့ များလေပဲ" (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
"အစဉ်အလာက အရေးမကြီးဘူး။ အမှန်တရားက အရေးကြီးတယ်။ အစဉ်အလာထက် အမှန်တရားကို တန်ဖိုးထားတယ်လို့ စိတ်ထားပြောင်းသွားတာနဲ့ အစဉ်အလာရဲ့ အနှောင်အဖွဲ့ကနေ လွတ်လာတော့တယ်" (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
"သံသယ ဖြစ်တတ်တဲ့ သူတွေကြောင့် လောကကြီး တိုးတက်လာတာ။ သို့မဟုတ်ရင် ဘာမှ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ တိုးတက်မှာ မဟုတ်ဘူး" (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
"ယုံလွယ်သူတွေကြောင့် တိုးတက်လာတာ မဟုတ်ဘူး" (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
"အမှန်တရားကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် နေရာပေးချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်နဲ့ လက်မခံတာပါ။ လွယ်လွယ်နဲ့ လက်ခံရင် မလေးစားရာ ရောက်တယ်" (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
"အခုခေတ်မှာ ပြောတဲ့သူကလည်း ကိုယ်တိုင်သိလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ယုံတဲ့သူကလည်း ကိုယ်တိုင်သိလို့ ယုံတာမဟုတ်ဘူး" (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
Posted by Kaung Kin Ko at 10:16 AM
Labels: For Free Thinkers, အတွေး
soe gyi said...
ွှ Super Like.....Thanks my Bro!
ဘာသာရေးကို စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာ တိုးတက်မှုတခုပဲ။ အသိတရား အားကောင်းသူက ဘာကိုမှ မယုံဘူး ။ ဦးဇောတိကနဲ့ ကောင်းကင်ကို ကျန်းမာပါစေ ။
Nobody is denying your right to be free thinker. But you must respect other people right.
clever work and reporting! Keep up the superb works guys I've added you guys to my personal blogroll.
Here is my blog post ... http://simeonnetwork.org
Humanism ဟာ ဘိန်းအစားထိုး သီးနှံ